रमाइलो गर्दै भनिन्छ, ‘ग्याष्ट्रिक त नेपालीको पहिचानै हो’ । यसको अर्थ हो हामी मध्ये धेरैलाई ग्याष्ट्रिकले दुःख दिइरहेको छ । खालीपेट भइरहन्छ, मुखबाट अमिलो पानी आउँछ । प्रायः खाना खाएको केही समयपछि अमिलो–अमिलो अनुभूति हुन्छ र एकाएक बान्ता होला जस्तो पनि हुन्छ । पेटमा जलन हुन्छ । यस्तै यस्तै समस्या छ भने बुझ्नुहोस्, तपाईंलाई पनि ग्याष्ट्रिक छ ।
एसिडिटीले सताएपछि खाना खाएपछि पनि पेटमा जलन भइरहन्छ । झन तनाव त त्यतिबेला हुन्छ, जब चिल्लो पदार्थ खाइन्छ । यस्तो बेला औषधी नै खानुपर्ने अवस्थासम्म आइलाग्छ । यदि तपाईं पनि यस्तै समस्याबाट प्रभावित हुनुहुन्छ भने खानपिनमा दिइने सामान्य नियमितता र हेरचाहले यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
१. कहिलेकाँही त एसिडिटी आफैँ ठिक हुन्छ । तर लामो समयदेखि यस्तो समस्या छ भने समयमै उपचार नगर्दा धेरै ठूलो नोक्सानी पनि बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । यसले पेप्टिक अल्सर पनि निम्त्याउन सक्छ । यसपछि भने उपचारको लागि इन्डोस्कोपीको सहयोग लिनुपर्ने हुनसक्छ ।
जसलाई ग्यास्ट्रिकको समस्या छ, उसले आफ्नो खानपिनमा ध्यान दिनुपर्छ । आफ्दो दैनिक खानपानबाट त्यस्ता कुराहरु हटाउनुपर्छ जसबाट अमिलो पदार्थ बन्छ, एसिड बन्छ । बायाँ कोल्टे फर्केर सुत्नु यस्ता समस्या भएकाहरुका लागि उपयुक्त हुनसक्छ ।
२. जब सुत्नको लागि ओछ्यानमा जानुहुन्छ, तब आफ्नो टाउको केही अग्लो राखेर सुत्नुहोस् । यसबाट तपाईं सुतेको समयमा शीरमा जलन हुँदैन । तपाईंलाई अन्य समस्या छैन भने एउटा दुईटा तकिया थपेर सुत्न पनि सक्नुहुन्छ ।
३. थोरै थोरै गरेर खानुहोस् तर दिनमा ३ देखि ४ पटकसम्म खानुहोस् । एकैचोटि धेरै नखानुहोस् । भोक लाग्नासाथ खाइहाल्नुहोस् । सकेसम्म खाना खान नछुटाउनुहोस् । किनकी लामो समय ग्याप राखेर खाँदा धेरै खाइने सम्भावना बढ्छ । एकैपटक धेरै खाँदा पाचन प्रक्रियामा समस्या हुन्छ । यसबाट एसिड बन्न सक्छ । यसकारण कम खाने तर समयमै खाने गर्नुपर्दछ ।
४. खानालाई राम्रोसँग चपाएर खानुहोस् । किनकी चपाएर खाँदा पचाउन सजिलो हुन्छ र एसिडिटी पनि हुँदैन । चपाएर खाँदा स्लाइव बन्छ, जुन एक प्राकृतिक एल्कलाइन (अल्काली) हो, जसले प्राकृतिक तरिकाबाटै एसिडलाई क्षारमा बदलिदिन्छ । पुदिनाको स्वादमा बनेको वस्तुहरु वा कफ सिरफ नपिउनुहोस्, किनकी यसले एसिडलाई बढाउन भूमिका खेल्दछ ।
५. एसिडिटीलाई तह लगाउन धेरै पानी पिउनुपर्छ । गर्मीमा चिसो पानी पिउनुहोस्, किनकी पानीले एसिडिटी घटाउन मद्दत गर्दछ । हरेक बिहान उठेर मनतातो पानी पिउनुहोस् । राति सुत्ने बेलामा धेरै खाना नखानुहोस् । खाना खाएपछि केही क्षण टहलिनुहोस् । यसबाट खाना पच्न मद्दत पुग्छ । सुत्नुभन्दा कम्तिमा पनि चार घन्टा अगाडि खाना खानुहोस् । यसकारण ८ बजे वरिपरि खानाखानु स्वास्थ्यका लागि उपयुक्त हुन्छ ।